May 22, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Somaliland, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 17
Magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag waxaa caawa buux dhaafiyay ciidamo katirsan Puntland iyo maleeshiyaad taabasan Jabhadda Dulmidiid ee uu hogaamiyo jeneraalka gadooday ee Coll.Caare.
Ciidamada kusugan Dhahar oo kuhubaysan hub culus ayaa diyaar u ah duulaan ay kuqaadaan fariisimaha Somaliland ee gobolkaasi.
Af-hayeenka guud ee Jabhadda Dulmi diid Samadoon Yoonis Siciid Cilmi oo caawa kamid ah saraakiisha ciidan ee Dhahar ku sugan ayaa ka hadlay iska hor imaadkii maanta ka dhacay Damala-Xagare.
Waxa uu sheegay dagaalka inay qayb ka ahaayeen islamarkaana jab xoogan gaadhsiiyeen ciidankii Somaliland ee soo weeraray wafdi uu higaaminayay wasiirka waxbarashada Puntland.
Kkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
War ninku hadliba kari maayee ma xabad TAREESSO ah baa dhuunta ka gashay kkkkk intu usoo miliqsanayaay NUS MALYUUN kii yaraa ee Hargeisa looga soo qadhiidhay baaa HUNGURIGII yaraa xidhmay…JIQQ.
War bal biyo qaboow iyo SHARAABA LIIN kuqabta intaan wadnuhu istaagin oon HEART ATTACK ku dhicin.
War dagaal dhacay maba jiro ee sl ayaa gacanta ku dhigtay badhan,kkkkkkkkkkkk
walahi wasiirka cadaladu waa landhere marba hadu canadirtii pl ka eryaday badhan ilaa xadkuu soconayaa.
Somalilander wan ku salamay,
Wan kaa qaaday indr salaanta duriyada reer sheikh isaxaaqa iyo tii gaar ahaaneed ee Jamhuurayada Somaliland.
Waan oghy indr wax dagaal ah oo dhacay majiree intii yarayd ee budhlayn ka joogtay BADHAN uunbaa la qaqabtay.
Ramadan Mubarak Mujaahid.
Nacalada iidoorka isaaqa Cali beysteenka ah we aanan swoon wax kale bal dalgaal. Ciyaalka iidoorka waxaa dhegta loogu sheegey inte xabadu Karin iidoorka afka qudhmuunle.
Ma markaad waxaad ku hadasho garan weyday ayaad caytantay.
Hayska caytamaan indr caawaa, kkkk marhadii afkii juuqda gabay oon jirin wax lagu hadlaa oo faankii lasoo afjaray, dee intaas yar haku nafisaane aynu u dayno yaynaan keeyr & sharba ka ka xidhin oo ka HANDARAABINE.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waar horta suldaan Axmadoow mastaafurkii ka dhacay KENYA ee ku dhacay NABBAR & NAXDIN & bahdilaadi ku dhacday FARMAAJO wali maka hadleen oo jawaab ma bixiyeen waxa kasoo wareegtay 9 sacaadoode.
Waleee kheeyre Farmaajo FAASHILUUUU baa ku dhcday.
Fallagada argagixisada SNM oo sidoodii caruurtii iyo maatadii iyo shacabkii oo weerarro kala duldhacay iyo caro iyo geesiyaashii oo eedsiiyey masha Allah.
Daarood iyo inta muslimiinta ah TRAWIIX WANAAGSAN walaal trawiixdii baa lawada jiraa
Habo salaanteenii barakada iyo kheyrka lahayd baan hawada Ramadhaan kuu soo mariyay. Salaanta ka dib walaal waxa magacyada badan ku soo galaya waa qof mise labo ee ha u bixina.
Iga qora in maalmaha ay sidan isugu dhex yaacaan oo ay tobanka magacyo meesha ba ugu fatahaan uu jab xuni ku habsaday oo qandhadii Code 99 ay la barooranayaan. Waa lagu yaqaannaa. Qosol gariirka ka garta.
Duul adduun iyo aakhiro seeg ah ee uu shayddaanku u durbaan tumayo weeye waxba hadalkiina sharafta iyo miglaha leh yaydaan ku khasaarinin. Waa cadho daandaan oo wax ay ku furtaan bay baadi goobayaan.
Waxaas oo boodh iyo qiiq ah waxay u kicinayaan in aan jabka ku dhacay laga faalloonin oo ay ka tahay meesha ba ka camira oo ka wasakheeya. Maleeshiyadii Habraha iidoor baa caawa labada dhinac shiishka isku haya ee ma jab kale ayaa u hadhsan?
Kkk haweenku waa imtixaan, markay tolaay yaa reer hebelaay ragaygii halkuu maray miyaa la dubaay iyo baroor ku dhuftan, baa ragii dhufaysyada ku jiray ee nafta u yabanaa ee marka horeba rasaaata WIIF teeda ka dhuumanayaay madaxa soo kiciyaan.
Ala maxay rag aan tabar ba hayn dabargooyeen.
Dhulka sow Anigu Malihi ninkii dhoof ku yimi bay Geeridu Dhibaysaa?..
1)jeegaanta dariska nahay, Doollo dhinaceeda.
Nimankaan ku darandoorrin lahaa, iima duurxuline.
Inaan adiga dood kuu ceshaa, waa dabbaalnimo e.”?…..
Iidoor”: Fuleynimo daraaddeed maxaa, boodhka kugu duugay?
Dayuus liita waa lagu ogaa, damaca beenaade.
Ka dabbaala dabinkaad gashiyo, daxalka aad qooshtay.?(Ciyaarta Naga
Daaya- Dagaal waa Galin Danbe)?
Kkkkkkk waxay yidhaahdeen caawa ayay ciidamadii xooga dalka ee Soomaliya dhoola tus sameyeen. Kkkk
Waxay intaas ku dareen waxay kiciyeen diyaaradahooda qumaatiga u kaca, madaafiicna korka ayay u ridayeen. Kkkk sidaas ayayna Kiiniya ugu jawaabeen. Kkkkk
Oo tollow goorma ayay Helicopters soo gateen? Kkkkk xiidamo dhuulo tus sameeyana goorma ayay ueesheen? Kkkk
AMISOM iyo Alshabaab ayay iska xoreyn kari la yihiin oo waxey ka hadleyaan dhoolo tus iyo Kiiniya ayaanu u jawaabnay. Kkk
Socon waynee aan orodno.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
comandos of somaliland says:
waxba umuu qarin kani malulkii puntland waayo wuxuu yidhi labo na way dhinteen lixna waa dhaawac dee anigu waxaan kula talin lahaa intaas ka badan ma adkaysan karaysaane iska taga haween ilaa haween weliba
ka waran markay xalay ciidankii ugu badnaa u soo ruqaan sadeen deegaan sanaag jabkii puntland ama inay dan qaatan kolay iyagaa dhegan jilicsane😃😃😃😃😃😃😃😃😃
wac waan kaa qaaday wallal salaanta qiimaha badan ee saldanada reer Sanaag ee sharafta iyo xigmada badan oo dadkeenu inta badan kusifoobeen maxaa jira waxaan kukoriyay guryo wanaagsan iyo decent families oo diin usaaxiib ah qof walbana waxaa calaamad uah hadlkiisa iyo qoraalkiisa adigoo aanba waligaa lakulmin ayaad kala sheegi kareeysaa Meesha uu kasoo baxay ama background kiisa iyo dhaqankiisa sidaas darted baanan inta badan kuba darsan markaan arko wax ISKU DHEXYAACSAN oo hadalka kiisa laga yaq yaqsoodo iyo kiisa laga faano aan kaxishoon.
Walaal waxaa laiisheegay in jab kudhacay ayagoo weliba dagaal usoo diyaar garoobay hadana cagaha wax ka dayeen! kkk Taasi waxay kutuseeysaa in DULMI uusan guuleeysan. Waxa soo hogaaminaayana waa marabidii eey petrol ka kusoo shubteen ee ma ayagaaba si kale ku iman karaba oo awood uleh ineey dhulkeena iska soo galaan maxaa jira GEESI NIMADAAS laguma sheegeen reerku. kkk
sixid- waxaan ku koriyey= waxaan ku kornay